Toriteny alahady 06 jolay 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 06 jolay 2014
Genesisy 12:1-5 / Marka 2:13-17 / Galatiana 3:6-9
Izaho koa ve mba mety hanana anjara amin’ny lova Masina ?
Levy na i Matio nifanena tamin’I Jesoa ka nilazany fa ho an’ny olona rehetra ny famonjena. Tsy manilika na manavaka ny famonjena atolotry ny Tompo, fa natao ho an’ny olona rehetra eny fa na dia ireo izay efa ahiliky ny fiaraha-monina aza.
Manasa anao hanaraka ny votoatin’ny fampianarana
1- Miantso ny olona rehetra ny Tompo
Olona nanana ny fahalemeny i Levy ary efa tenenin-dratsy satria mpamory hetra izany hoe mpanao kolikoly, lohan’ny mpanambaka nefa dia nantsoin’ny Tompo hanaraka Azy. Ny hoe antsoin’ny Tompo dia midika hoe mpiara-miasa amin’Andriamanitra ka ametrahany fitokisana ary manana najra amin’ny fanjakan’ny lanitra.
Lesona : Alaim-panahy isika matetika hitsara ny hafa ; na koa manamelo-tena tsy ho mendrika ny fanjakan’ny lanitra, nefa ataovy ho fifaliana ho anao ny fiantsoana anao ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra. Tsy niantso anjely akory ny Tompo fa ny olon’izao tontolo izao no tezainy mba ho tonga amin’ny fahamasinana ka ho mendrika ny handova ny fanjakan’ny lanitra.
2- Manaiky ny hampandrosoina ka miombona amin’ny sakafo
Fitondram-piainana mahazatra ny fiaraha-monina ny tsy mitakosina miaraka amin’ny olona ratsy fitondran-tena sy mihoa-pefy. Ny mifanohitra amin’izany anefa ny an’I Jesoa fa ireny olona very sy alohan’ny fiaraha-monina ireny no tadiaviny, toy ilay mpiandry nanana ondry very ka navelany mihitsy aloha ny 99 ary rehefa hitany iny dia nanaovany fety be Miara mihosona amin’ny olona maloto ny Tompo mba ho famonjena azy ireny.
Lesona : Adidiko izaho sy ianao Fiangonana sady mpiara miasa amin’Andriamanitra , izay mahatsiaro efa nandray famonjena no manolo-tanana ny very mba ho tonga zanak’Andriamanitra fa natao ho an’ny olona rehetra tsy an-kanavaka ny famonjena.
3- Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary
Eto dia ny dokotera no manatona ny marary ka manontany izay mahazo azy. Amin’ny fiainana, rehefa manatona anao ny Tompo dia aborahy Aminy ny mamatotra anao rehetra. Rehefa ny olona no mahatsiaro ny fahalemeny ka vonona hiala amin’izany dia azo antoka ny famonjena azy. Manamarina izany ilay teny manao hoe ny mpijangajanaga sy ny mpangalatra no mialoha lalana ho any amin’ny fanjakan’ny lanitra, satria izy ireny rehefa nihaona tamin’I Jesoa dia nifona ka nanapa-kevitra hiala amin’ny fomba ratsy ary hampiditra an’I Jeso hanapaka ao am-pony.
Hafatra : Ry havako malala, iza amintsika no sahy milaza fa marina eo anatrehan’Andriamanitra. Tsia fa raha diso amin’ny zavatra iray loha dia diso amin’izy rehetra. Na toy inona na toy inona fahadisoana manameloka antsika , aoka tsy hanaiky ho resin’ny fahakiviana sy ny fanamelohan-tena fa Jesoa no manome toky, ka miteny amiko sy aminao androany fa natao ho an’ny olona rehetra ny famonjena dieny ety an-tany dia efa isalorantsika izany ary mitohy hatrany an-danitra. Fa Andriamanitra manan-karena amin’ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika ary tena manana anjara amin’izany izaho sy ianao .
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra . Amen !
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 8 juillet 2014